Umzi mveliso weYuba - China Yuba abavelisi, abaxhasi
Intonga yeBhontshisi entsha
Entsha Iibhontshisi zentsimbi, ekwabizwa ngokuba yi-yuba entsha, yimbotyi yesiko eyenziwe ukutya kunye nokutya okuqhelekileyo okuluhlaza kwiindawo zaseTshayina naseAsia. Inencasa yeembotyi eyomeleleyo kunye nencasa eyahlukileyo engenazo ezinye iimveliso zembotyi. Iintonga ezintathu zembotyi ezenziwe ngombala zenziwe ngeembotyi zesoya, imbotyi eluhlaza kunye neembotyi ezimnyama, zigcina umbala oyintloko weembotyi, ngaphandle kwezongezo, zinencasa esisityebi nevumba elimnandi.
Intonga yebhontshisi entsha inezixa eziphezulu zezondlo, eziqulathe amafutha ali-14g, 21.7g protein, 48.5g iswekile nezinye iivithamini neeminerali nge-100g. Umlinganiselo wezi zinto zintathu zamandla ulungelelene kakhulu. Ukuyitya ngaphambi nasemva kokuzilolonga, kungagcwalisa ngokukhawuleza amandla kwaye kubonelele ngeprotein efunekayo ekukhuleni kwemisipha.
Amashiti eembotyi omisiweyo, ekwabizwa ngokuba zii-yuba sheet, yimbotyi yesiko eyenziwe ukutya kunye nokutya okuqhelekileyo okuluhlaza kwiindawo zaseTshayina naseAsia. Inencasa yeembotyi eyomeleleyo kunye nencasa eyahlukileyo engenazo ezinye iimveliso zembotyi.
Emva kokuba ubisi lweembotyi zesoya lufudunyezwe kwaye lubilisiwe, kwenziwa ifilimu ebhityileyo ngaphezulu emva kwexesha lokugcina ubushushu. Emva kokukhethwa, ixhomekeke kwimilo yamashiti kwaye iyomiswa.
Iinkuni zentsimbi ezomileyo ezomileyo, ezikwabizwa ngokuba yi-black bean yuba, yimbotyi yesintu eyenziwe ukutya kunye nokutya okuqhelekileyo okuluhlaza kwiindawo zaseTshayina naseAsia. Inencasa yeembotyi eyomeleleyo kunye nencasa eyahlukileyo engenazo ezinye iimveliso zembotyi.
Iimbotyi zesoya ezimnyama ziphezulu kwiiproteni kwaye zineekhalori eziphantsi. Iimbotyi ezimnyama ziqulathe i-360% -40% yeeprotheyini, ephindwe kabini kunenyama, ephindwe kathathu amaqanda kunye namaxesha ali-12 ngobisi. Iibhontshisi ezimnyama ziqulathe iintlobo ezili-18 zee-amino acid, ngakumbi iintlobo ezi-8 zee-amino acid eziyimfuneko emzimbeni womntu. Ubhontshisi omnyama uqulethe iintlobo ezili-19 ze-oleic acid, umxholo wayo we-asidi ye-fatty engafakwanga i-80%, inqanaba lokufunxa liphezulu njenge-95% ngaphezulu, ngaphandle koko linokwanelisa umzimba womntu ukuba udibanise ngaphandle kwemfuno, usenaso isenzo esinciphisa i-cholesterol egazini.
Iibhontshisi ezomileyo ezomileyo, ezaziwa njengeyuba, yimbotyi yesiko eyenziwe ukutya kunye nokutya okuqhelekileyo okuluhlaza kwiindawo zaseTshayina naseAsia. Inencasa yeembotyi eyomeleleyo kunye nencasa eyahlukileyo engenazo ezinye iimveliso zembotyi.
Emva kokuba ubisi lweembotyi zesoya lufudunyezwe kwaye lubilisiwe, kwenziwa ifilimu ebhityileyo ngaphezulu emva kwexesha lokugcina ubushushu. Emva kokucholwa, iyajinga imile kumila kwamasebe emva koko yomiswe. Ubume bayo bufana namasebe oqalo, yiyo loo nto ibizwa ngokuba yimithi yebhontshisi.
Iintonga zeBean ezomileyo
Ukutya amandongomane anetyuwa, Intonga yeBhontshisi entsha, Iibhiskithi zaBantwana, Iipakethi zesosi yeSoy, Ikhukhi yeLadyfinger, Umtya weHawthorn,